We Fight We Win. -- " More than Media ": ဒီနေ့ သတင်းများ
12:10 မိနစ်ခန့်က ၁၂ဘီးကားနှင့် လူ(၁၀၀)၀န်းကျင်ခန့်အပြည့်တင်လာ
လတ်တလောဖြစ်ပွားနေသော အဓိကရုဏ်း၊ ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ၈၈မျိုးဆက်မှ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်
----------------------------------------------------- လတ်တလောဖြစ်ပွားနေသော အဓိကရုဏ်း၊ ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ယနေ့ မတ်လ၊ ၂၈ ရက် မွန်းလွဲ ၃ နာရီက ရန်ကုန်မြို့၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ သုမင်္ဂလာလမ်းရှိ ၈၈မျိုးဆက် (ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း)ရုံးတွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ၈၈မျိုးဆက်မှ ယမန်နေ့က ထုတ်ပြန်ထားသည့် သဘောထားကို ဂျင်မီက ရှင်းလင်းပြောဆိုသွားပြီး တက်ရောက်လာသော သတင်းဌာနများမှ မေးမြန်းသော မေးခွန်းများကို မင်းကိုနိုင်နှင့် ကိုကိုကြီးတို့က ဖြေကြားသွားခဲ့ကြသည်။
”သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုကို လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင် အခုလိုမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုတားဆီးကြမလဲ” ဆိုသည့် ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်းမှ မေးမြန်းချက်ကို မင်းကိုနိုင်က ဖြေကြားရာတွင် “ ဒေသခံတို့၏ ညီညွတ်မှုက အရေးကြီးကြောင်း၊ ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေး တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၊ ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ ဒေသတွင်း သြဇာကြီးမားသည့် ရဟန်းရှင်လူများ စုပေါင်းညီညွတ်လျှင် ယခုလိုအကြမ်းဖက်မှုမျိုးကို ကြိုတင်တားဆီးနိုင်ကြောင်း၊ ပြည်မြို့သည် ယမန်နေ့က ထိုညီညွတ်မှုမျိုးဖြင့် တားဆီးသွားနိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။
DVB သတင်းဌာနမှ “ယခုဖြစ်ပွားနေသောကိစ္စရပ်များကို ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းလို့ သတ်မှတ်ပါသလား၊ အကြမ်းဖက်မှုလို့ သတ်မှတ်ပါသလား။ ပြည်ထဲရေးဌာနရဲ့ အားနည်းချက်ကြောင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်ခဲရသည်ဟု ဆိုချင်ပါသလား”ဟု မေးမြန်းရာတွင် ကိုကိုကြီးက ယခုဖြစ်ပွားနေသောကိစ္စရပ်များကို ရာဇ၀တ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ပါကြောင်း၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ပဋိပက္ခဖြေရှင်းနိုင်စွမ်း ထိရောက်ထက်မြက်ရန် လိုအပ်သည်ဟု ယမန်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တွင် အတိအလင်းဖော်ပြထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားသွားခဲ့ပြီး သတင်းဖော်ပြပုံများကိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းဖော်ပြနိုင်အောင် ကြိုးစားပေးစေလိုကြောင်းလဲ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
သတင်းဌာနများမှ မေးမြန်းသော မေးခွန်းများကို ဖြေကြားအပြီးတွင် အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့်နေရာများသို့ ၈၈မျိုးဆက်မှ သွားရောက်ကူညီပေးနေမှုများကို ရှင်းလင်းပြောပြခဲ့ကြသည်။
ဆရာတော်ဦးဝိသုဒ္ဒ၊ ရထနာဦးကျောင်း၊ မိထိလာမြို့ ဆရာတော်ဟာ ဗုဒသာသာနာရဲ့အာဇာနည် တပါးဖြစ်ပါတယ်။ ၀ီရသူ ရဲ့ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့က မူစလင် ၂၀၀ နီးပါးကိုရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ် နေ ချိ်န်မှာ သူဟာ မူစလင် ကလေတွေ၊ မိခင်တွေ၊၊ သက်ကြီးရွယ်အို နဲ့ ယောက်ကျားတွေ ၈၀၀ ခန့် ကို သူကျောင်းဝင်းထဲမှာကယ်တင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော်အကြောင်း အပြည့်အစုံကို မန်းက ရဲဘော်တွေရေးသားပြုစုနေကြပါတယ်။ ကျနော်က သတင်းဆိုးတွေထဲက သတင်းကောင်းလေးမို့မျှဝေလိုက်တာ။ အပြည့်အစုံကို မန်းက မိတ်ဆွေတွေရေးတာ တင်လာတော့မှ ဖတ်ကြပါ။ ဆရာတော်ဓါတ်ပုံကို ရှယ်ပေးတဲ့ မအမာနီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာ ဘာသာပေါင်းစုံ ဆုတောင်းပွဲ ကျင်းပမယ်
KO Han Win Aung 28-3-2013
လက်ပန်တောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်းလုံးဝဖျက်သိမ်းရေး၊တဖက်သတ် ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပုဒ်မ(၁၄၄)ရုတ်သိမ်းပေးရေး၊မီးလောင်ဗုံးတရားခံများကိုအ ရေးယူပေးရေး၊ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီအလိုမရှိ၊မြန်မာဝမ်ဘောင်ကုမ္ပဏီအလိုမရှိစ သည့်တောင်းဆိုချက်များကိုဆန္ဒဖော်ထုတ်တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်၊ဆန္ဒုပြမှုကို မိုးကြိုးပြင်ရွာ၊တုံရွာတို့မှဦးဆောင်ခဲ့ကြပြီး၊သတ်မှတ်လူအင်အား(၅၀၀)ခန့် ဖြင့်ယနေ့နေ့လည်(၁)နာရီတွင်တုံရွာရှေ့မှစတင်ချီတက်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးညနေ (၃)နာရီတွင်မုံရွာပုသိမ်လမ်းဆုံ၊ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီရုံးရှေ့၌ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်၊အာဏာ ပိုင်များအနေဖြင့်ဆန္ဒပြလမ်းတလျှောက်လိုက်လံစောင့်ကြည်ခဲ့ပြီးမှတ်တမ်း တင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်၊ယခုဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုသည်ကျေးရွာအသီးသီးမှ အလှည့်ကျတာဝန်ယူဆန္ဒဖော်ထုတ်မှု(၄)ကြိမ်မြောက်ဖြစ်သည်၊ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာထွက်ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းကုမ္ပဏီဘက်မှကြေးနီစီမံကိန်းကိုတဖက် သတ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေပြီးလျှော်ကြေးမယူထားသည့်လယ်သမားများ ပိုင်မြေယာများကိုလဲမတရားသိမ်းယူမှုများကိုနေစဉ်ဆောင်ရွက်နေပြီးအာ ဏာပိုင်များဘက်မှကုမ္ပဏီကိုအကာအကွယ်ပေးသည့်အနေဖြင့်ဒေသခံပြည်သူများကိုပုဒ်မ(၁၄၄)လဲထုတ်ပြန်ထားဆဲဖြစ်ပါသည်၊၊ဒေသခံများအနေဖြင့် မိမိတို့မြေယာများကိုမှုလအတိုင်းလုပ်ကိုင်စားသောက်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် နေ့စဉ်လှုပ်ရှားတောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်၊၊ ၂၈-၃-၂၀၁၃ ညနေ(၃း၁၀)နာရီ လက်ပန်တောင်းတောင်ဒေသပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ
မိတ္ထီလာကိစ္စအပါအဝင် လတ်တလော ဆူပူမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးမှ ပြည်သူလူထုထံသို့ ရှင်းလင်းပြောကြားချက်
(အင်အားသုံးပြီး ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတာကို မနှစ်မြို့သော်လည်း ပြည်သူလူထုရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ် လုံခြုံမှုကို ထိပါးတဲ့လုပ်ရပ် မှန်သမျှကိုတော့ လုံးဝ လက်သင့်ခံမှာ မဟုတ်ဘဲ လိုအပ်လျှင် မြို့ပြအင်အားသုံးပြီး ထိထိရောက်ရောက် တားဆီးနှိမ်နင်းသွားရမှာ ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ပြောကြား)
သာမန်ပုဂ္ဂလိက အငြင်းပွားမှု၊ သာမန်မှုခင်းတခုကို အကြောင်းပြုပြီး မိတ္ထီလာမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခများ တည်ငြိမ်စ ပြုလာသည့် အခြေအနေမှာ ပြည်သူလူထုကြီးရဲ့ ရိုးသားမှုကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ရန်ကုန်မြို့ အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံဒေသ အနှံ့အပြားတွင် ဆူပူမှုများ ကူးစက်ပျံ့နှံ့ရန် လှုံ့ဆော် လုပ်ဆောင်လာမှုများကို စိတ်မချမ်းမြေ့ ဖွယ် တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်ရဲ့ သဘောထားနဲ့ အစိုးရရဲ့ ရပ်တည်ချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြား သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သွးထိုးမှုတွေ လှုံ့ဆော်မှုတွေကြောင့် အခြားမြို့ကြီးများကို ပဋိပက္ခများ ကူးစက်မယ့် အန္တရာယ်ကိုလည်း အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ရပ်မိရပ်ဖတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လုံခြုံရေး အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံး ဝိုင်းဝန်းကာကွယ် လုပ်ဆောင်နေကြတာကို လည်း တွေ့ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင် ဝမ်းမြောက်မိ ပါတယ်။ မတူညီတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ၊ လူမျိုးစုတွေနဲ့ မတူညီတဲ့ ကိုးကွယ် ယုံကြည်မှုတွေ အကြား အချင်းချင်း အပြန်အလှန်လေးစားမှု၊ နားလည်မှုရှိတဲ့၊ ယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ နေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ရပ်တည် နိုင်ဖို့အတွက် ကြိုးပမ်းနေကြတယ်ဆိုတာကိုလည်း သက်သေထူရာ ရောက်ပါတယ်။
ပုသိမ်မြို့တွင် မတ်လ ၂၇ ရက်မှစ၍ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအပြင် တပ်မတော်သား
များပါ လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်မြို့တွင် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းမှ စတင်၍ မြို့အနှံ့ လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအပြင် တပ်မတော်သားများပါ ကင်းလှည့်စောင့်ကြပ်မှုများနှင့်
ရပ်ကွက်အလိုက် လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
“ကောလာဟလတွေကတော့ နေရာပေါင်းစုံကနေ အမျိုးမျိုး ကြားနေတာပါ၊ ကျွန်တော်တို့လည်း လုံခြုံရေးသတိ အမြဲရှိစွာနဲ့ နေပါတယ်၊ ကိုယ်မြို့
သူမြို့သား အချင်းချင်းကတော့ ဘာမှပြဿနာ ဖြစ်စရာမရှိပါဘူး၊ မမြင်နိုင်တဲ့ရန်သူကိုဘဲ ကြောက်တယ်၊ အခုလို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရော တပ်မတော်သားတွေပါ လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်နေပြီဆိုတော့ သိပ်တော့ မစိုးရိမ်ရတော့ဘူး” ဟု ပုသိမ်မြို့ခံတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
ယ္ခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဖြစ်ပွားနေသည့် ပဋိပက္ခများအပေါ် အခြေခံ၍ ပုသိမ်မြို့တွင်လည်း ကောလာဟလ သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေမှုကြောင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ အပါအ၀င် မြို့သူမြို့သား အများစုမှာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ရှိနေကြရာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက လွန်ခဲ့သည့် ရက်များမှပင်
နေ့ရောညပါ မြို့တွင်းမြို့ပြင် ကင်းလှည့်စောင့်ကြပ်မှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့
“ပုသိမ်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ ရပ်ကွက် ၁၅ ခုမှာတော့ မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့ကစပြီး ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီ ဖွဲ့ခဲ့တယ်၊ အဲဒီကော်မတီက ရပ်ကွက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပဋိပက္ခဖြစ်စေမဲ့ ကိစ္စတွေကို ၀ိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းသွားဖို့ ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပုသိမ်မြို့ရှိ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တစ်ဦးက ပြောပြသည်။
ပုသိမ်မြို့တွင် ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ပဋိပက္ခများ မဖြစ်ပွားစေရေးတွက် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်း
များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့များ၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်း
များ ပူးပေါင်း၍ ဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင်
ဘာသာရေးမီးတောက်ကြီးထဲက သူငယ်ချင်းနှစ်ဦး
ဒီပုံကတော. မိတ္ထီလာဒုက္ခသည်စခန်းရောက်နေတဲ. (ညာဖက်) သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ကိုအစ္စရမ် (ခေါ်) ကိုသန်းဝင်းကို တစ်မြို.တည်းနေ ဗုဒ္ဓ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးကိုသန်.
ဇော်ဝင်းက ဒုက္ခသည်စခန်းနားမှာလာတွေ.တာပါ။ ကိုသန်းဇော်ဝင်းက သူ.သူငယ်ချင်းအတွက် ရေသန်.ဘူးတွေရယ်၊ မုန်.တွေရယ်လာပေးတာပါ။
သူတို. ၂ ယောက်လုံးရဲ.အိမ်တွေမီးရှီု.ခံလိုက်ရတာပါ။ ကိုသန်းဇော်ဝင်းက မြို.ထဲမှာမီးတင်ရှို.ခံရတဲ.ပါကစ္စတန်ဂျာမာဗလီဘေးနားမှာ ကားတာရာဆိုင်ရှိပါတယ်၊ ဒီဆိုင်ဟာသူ.ရဲ.အိမ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဗလီမီးရှို.ခံရတဲ.ညမှာဘဲ ဒေါသထွက်နေတဲ. မွတ်စလင်တစ်ချို.ကသူ.ဆိုင်ကိုလာရှို.သွားတာလို.ဆိုပါတယ။ ဒါပေမဲ. သူ.ငယ်ချင်းမွတ်စလင်ဘောလုံးကွင်းဒုက္ခသည် စခန်းမှာ ဘယ်လိုအခက်တွေ.နေမလဲ၊ သူ.လိုမျိုးမြို.ထဲဟိုဟိုဒီဒီထွက်လို.မရတဲ. သူငယ်ချင်းဘာတွေလိုနေမလဲလို.သိချင်တာနဲ. မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းကိုလာတာပါ။
မွတ်စလင်သူငယ်ချင်းဖြစ်သူကလည်း ဗုဒ္ခဘာသာတွေကိုမုန်းတီးစိတ်မရှိတဲ.အကြောင်း၊ ဒီအရေးအခင်းဟာမထင်ထားဘဲဖြစ်လာတဲ. အကြောင်း ...မွတ်စလင်တွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်မီးတင်ရှိူု.သတ်ခံရပေမယ.် သူဟာ ဗုဒ္ခဘာသာမြန်မာတွေနဲ. ဆက်လက်နေထိုင်လုပ်ကိုင်စားသောက်လိုကြောင်းဆိုပါတယ်။ ရခိုင်မှာလို ဒီလူတွေနဲ. ကျနော်တို.ပြန်နေထိုင်လို.မရတော.ဘူးလို.ပြောတဲ.သူနည်းပါတယ်။ ဒါကထူးခြားမှုတစ်ခုပါ။
အကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေ ဇီးကုန်းကို လာကြတာ ဘူဒိုဇာတွေပါပါတယ်။
ပလီတွေ အိမ်တွေကို မီးရှိူ့ ဖို့လုပ်တော့ ရပ်ကွက်လူခံတွေက ၀ိုင်းတားလို့ မီးတော့မရှိူ့ဘူး။ ဘူဒိုဇာနဲ့ ထိုးဖျက်သွားတယ်။
အကြမ်းဖက်အုပ်စုထဲမှာ သင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့ ဘုန်းကြီးအတုတွေလည်း ဒါးလွတ်တွေ တရမ်းရမ်းနဲ့ အော်ဟစ်ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းနေလိုက်ကြတာ။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုရားသားတော် သံဃာတော်တွေရဲ့  အရှက် သိက္ခာကို ချခွဲနေကြတယ်။
လုံထိမ်းတွေ ရဲတွေလည်း အဲဒီအနီးနားမှာ ရှိ်နေတယ်။ ဒါပမယ့် ဒီလိုပဲရပ်ကြည့်နေကြတာပဲ။ တားဆီးတာ ဖမ်းဆီးအရေးယူတာမရှိဘူး။
Here is the Neo-Nazi hate-monger in Saffron robe: Wirathu in 2003,
If violence does once again break out, it will be agitators like Win Rathu at the lead. And this religious violence threatens to divert the world's attention from the real issue in Myanmar - the continuing deprivation of its people's prosperity by an unpopular military dictatorship.
"မိတ္ထီလာမြို့မှ အကြမ်းဖက်မှုမှာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကို တုန်လှုပ်စေခဲ့ပြီး နိုင်ငံ့ပုံရိပ်ညှိုးနွမ်းစေခဲ့သည်"
အောင်သူရရေးသား၍ သတင်းအဖွဲ့ ပံ့ပိုးသည်
မီးလောင်ကျွမ်းနေသော သီရိမင်္ဂလာရက်ကွက်သို့ ကိုဖြိုးသန့်မင်းတစ်ယောက် မတ်လ၂၁ ရက် ညနေ ၄ နာရီခန့်က သွားကြည့်သည်။ အိမ်တစ်လုံးထဲတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ခိုလှုံနေရာမှ ထွက်မရဖြစ်နေကြောင်း လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများထံမှ သတင်းကြားပြီးနောက် ၎င်းကိုကယ်တင်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ထိုနေရာသို့ သွားရောက်ပြီး အမျိုးသမီးအား လူအများ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မှန်း သတိမထားမိရန် မျက်နှာကို ဆိုင်ကယ်စီးဦး
ထုပ်ဆောင်း၍ ဖုံးကွယ်ကာ ကယ်တင်ခဲ့ကြောင်း ကိုဖြိုးသန့်မင်းက ပြောသည်။
အမျိုးသမီးကို ကယ်ထုတ်ပြီးနောက် ပိတ်မိနေသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များထံမှ လာရောက်ကယ်တင်ပေးရန် ဖုန်းများဖြင့်
မကြာခဏ အကူအညီတောင်းခံခြင်းခံရသည်။ ထို့ကြောင့် အောင်မြင်သာစည်ကျောင်းမှ ဆရာတော်နှင့်အတူ ကားနှစ်စီးဖြင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ၄၀ ကျော်အား ပိတ်မိနေသောအိမ်များမှ ထွက်ခွာနိုင်အောင်ကူညီကာ ခရိုင်အားကစားကွင်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြသည်။
“အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲ ဘာမှမရှိဘူး။ မဆိုင်တဲ့ လူတွေကို ကယ်တင်နိုင်ဖို့ပဲရှိတယ်” ဟု ထိုအချိန်က စိတ်ထဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့ ပုံကို အသက်(၄၆)နှစ်အရွယ် ကိုဖြိုးသန့်မင်းကပြောသည်။
“ဘုန်းဘုန်းတွေပို့တာလည်းပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရပ်ကွက်ခေါင်းဆောင်တွေလည်း အားကစားကွင်းကို ပို့ပေးတာလည်းရှိတယ်” ဟု ပညာရေးကောလိပ်ရှိ အစ္စလာမ် ဒုက္ခသည်ခေါင်းဆောင် ကိုမောင်မောင်က ပြောသည်။
“ နင့်တို့ကို ဘာမှမလုပ်ဘူး။ သွားစရာရှိတာသွားပါ” ဟု ပြောသဖြင့် သွားလိုသော နေရာသို့ဘေးကင်းစွာရောက်ခဲ့ကြောင်း အသက် ၄၁ နှစ်အရွယ် မမြင့်က အတွေ့အကြုံကိုပြန်လည်ပြောပြသည်။
“အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေထားတဲ့ အမှတ်(၁) ရဲစခန်းရှေ့ရောက်တော့ အထဲကနေ လက်ထောင်ပြတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ပြန်ထောင်ပြတော့ ကွမ်းစားချင်လို့ ဆေးလိပ်သောက်ချင်လို့ ပြောတဲ့အတွက်ဝယ်ပေးခဲ့တယ်” ဟု မီးလောင်ပြာကျခဲ့ရသော ချမ်းအေးသာယာရပ်ကွက်မှ အသက် (၂၅) နှစ်အရွယ် ကိုအာကာက ပြောသည်။
“အိမ်တွေမီးရှို့ခံရတုန်းကတော့ ဒေါသဖြစ်တာပေ့ါ။ ဒုက္ခသည် စခန်းမှာတွေ့တော့ သနားသွားတဲ့အတွက် ကူညီပေးခဲ့တာ” ဟု ကိုအာကာက ပြောသည်။
“သံဃာတစ်ပါး သွေးမြေကျသွားတဲ့ ကိစ္စကြောင့်ပါ။ အစတုန်းကတော့ ဗလီတွေဘက် ပစ်မှတ်မရှိကြဘူး။ ပစ်မှတ်မရှိတဲ့ အကြောင်းလည်း လူအုပ်ကြီးက သတိပေးထားပါတယ်။ သံဃာတော်တွေကလဲ ကတိပေးထားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မဆီမဆိုင် သံဃာတစ်ပါးသွေးမြေကျတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ပစ်မှတ်ပြောင်းသွားတာပေ့ါ” ဟု ဆရာတော်ဦးဝီရသူက သူ၏အမြင်ကို မိန့်သည်။
“တတိယနေ့ကတော့ ပယောဂ ၀င်ပူးသွားပြီ” ဟု ဆရာတော်ဦးဝီရသူက မှတ်ချက်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့် ရွှေဆံကုတ်အရောင်းအ၀ယ်မှ စတင်ခဲ့သော အကြမ်းဖက်မှု သုံးရက်အတွင်း လူပေါင်းများစွာသေဆုံးခဲ့ကာ ဒဏ်ရာရသူဦးရေ များစွာရှိပေါ်စေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်တွင် မရိုးသားမှုအချို့နှင့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ နောက်ကွယ်မှကြိုးကိုင်သူအချို့ ရှိနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းသူများရှိသော်လည်း အစိုးရအနေဖြင့် ဖော်ထုတ်အရေးယူပြနိုင်ခြင်းမျိုး မရှိသေးပေ။
ပြဿနာဖြစ်ပွားနေစဉ်တွင် သက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအဖွဲ့များ၏ ကိုင်တွယ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ “ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က စပါးခင်းထဲမှာ ချထားတဲ့ စာခြောက်ရုပ်ထက်မပိုပါဘူး။ ဓားနဲ့ခုတ်လည်း ကြည့်နေတယ်။ မီးရှို့လည်း ကြည့်နေတယ်” ဟု ဒေါက်တာစန်းလှိုင်က မှတ်ချက်ပြုသည်။
“ဒီပြဿနာ ကြီးထွားလာတာ ဆက်ပြီးဖြစ်လာတာက အုပ်ချုပ်သူတွေက အချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့သဘော ဖြစ်သွားတယ်။
နောက်ကွယ်ကလည်း ပယောဂဆိုတာမျိုးလည်းပါနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးက ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဖြစ်ဖြစ်ချင်း ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတာမျိုးက အကောင်းဆုံးပဲ” ဟု ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ လွှတ်တော်အမတ် ဦးအေးမောက်က ပြောသည်။
“လူမျိုးရေးကို အခြေခံတဲ့ ဒါမှမဟုတ် ဘာသာရေးကို အခြေခံတဲ့ ပဋိပက္ခမျိုးတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးတွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို အကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ မေတ္တာတရား၊ ကရုဏာတရားစတဲ့ စိတ်နေသဘောထားတွေကိုလည်း အများက မေးခွန်းထုတ်လိမ့်မယ်။ အချုပ်ပြောရရင် တစ်တိုင်းပြည်လုံးအတွက် ရှက်စရာ ကောင်းပါတယ်” ဟု လူ့ဘောင်သစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မိုးဇော်က ပြောသည်။
“ဒီလိုရောယှက်နေတဲ့ နေရာမှာတော့ ပြဿနာတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဒီနေရာမှာ လူတွေက အရမ်းစိုးရိမ်နေတယ်။ အရမ်းကြောက်နေတာတွေ တွေ့ရတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မုန်းတီးတဲ့စိတ်တော့ မတွေ့ရဘူး” ဟု ဒုက္ခသည်စခန်းများအားလှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီးနောက် နမ်ဘီးယားက ပြောကြားသည်။
အစွန်းရောက်ဗုဒ္ဒဘာသာတို့ ရဲ့လူသတ်ပွဲကြီးကြောင့် မြန်မာနိင်ငံသားတို့ မရှိတဲ့သိက္ခာဆက်တိုက်
ကြဆင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ နိင်ငံတကာသတင်းဌာနမှ ဗုဒအကြမ်းဖက်သမား များ လုို့ သုံးစွဲတာ အတော်ကို ရင်နာစာကောင်းလှပါတယ်။ ပျက်စီးသွားတဲ့ နာမည်ကို အဖတ်ဆည်ရန် တမျိုးသားလုံးနစ်ပေါင်းများစွာကြိုးပန်းရပေတော့မယ်။
လူသားချင်းစာနာမှု့
မန္တလေးမြို့မှ အာရှ အလင်းရောင်ဆရာတော.် (၈၈) ကျောင်းသားဟောင်းများ.ဗ.က.သ ကျောင်းသားများနှင့် ရွေ ဘိုမြို့ ရွေခြင်္သေ့ ဆရာတော် ဦးဆောင်သော ဘာသာပေါင်းစုံပူး ပေါင်း၇်ျ မိတ္ထီ လာ မြို့ သို့ တတိယအကြိမ် ကယ်ဆယ် ရေး သွားရောက်ခဲ့ ရာ ပန်တျာ ဒေါ် ဌေးဌေးမြင့် တို့ မိသားစု ပါလိုက်ပါခဲက ပါတယ်
Like · · Share · Send ·7minutes ago ·